MAMPIASA ANARAN'ANDRIAMANITRA XB-70 Bob NASA FSX & P3D - Rikoooo
Amerika Avaratra XB-70 Bob NASA FSX & P3D
Downloads 18 692
Mpanoratra: Massimo Altieri, novokarin'i Bob Chicilo
Press "L" hampavitrika afteburner vokany. Ny 2D cockpit dia feno kokoa noho ny virtoaly cockpit
Ny any Amerika Avaratra XB-70 Valkyrie dia nitranga fahiny supersonic baomba ny US 1950 tara. Izany no natao avy any Amerika Avaratra. Dika mitovy roa ihany no naorina, ny iray izay rava tao amin'ny loza.
Ny famoizana ny nitranga fahiny maty sonia ny didy fampisamborana ny fandaharana. Ity fiaramanidina dia fiaramanidina dokam-barotra, maro ny mpanao gazety no vavolombelona ny amin'ny loza amin'izao tena lafo milina, dia milanja 250 taonina, ary efa lany fotoana 10 ny lanjan'ny volamena.
Tamin'ny Jona 8 1966, ny faharoa miala nitranga fahiny Edwards AFB mba hanatanteraka fandrefesana ny Sonic mamono maso. Ankoatra izany, manome fahafahana fitsapana io General Electric, mpanamboatra ny fitaovana XB-70, maka sary ny fiaramanidina dokam-barotra miaraka amin'ny F-4B Phantom II, F-104N Starfighter, F-5A Freedom Fighter sy ny T -38 Talon, Powered rehetra miaraka amin'ny fitaovana avy any General Electric. Fa ny F-104, nivoaka tao amin'ny misafotofoto taorian'ny niteraka ny XB-70, namely, nandrava ny ankavia mitsangana stabilizer. Taorian'ny 16 segondra ny fiaramanidina, ny baomba mahazo avy ny fanaraha-maso, dia nianjera.
Al White, ny XB-70 mpanamory, nandroahana Rehefa nandeha ny fotoana, fa ny copilot Carl hazo fijaliana dia tsy afaka ny eject sy novonoina, miaraka amin'ny mpanamory 'ny F-104, Joseph Albert Walker. (Source Wikipedia)
Battlestar Galactica Tos roa-pack FSX haingana
Boeing 7072 Orion supersonika fitaterana FSX